10 sifooyin oo uu leeyahay Madaxweynaha Wanaagsan !!! · Jowhar.com Somali News Leader
10 sifooyin oo uu leeyahay Madaxweynaha Wanaagsan !!!
by A M | Sunday, Oct 2, 2016 | 5603 views
Guud ahaan dalka iyo dibaddaba waxaa si weyn looga dareemayaa dhaq-dhaqaaqa doorashada Soomaaliya,gaar ahaan, tan hoggaanka sare oo aad loogu hardamayo sanadkan.
Musharraxiin badan oo issugu jira rag iyo dumar ayaa ku dhawaaqay in ay xilal ka doonayaan heerarka kala duwan ee hoggaanka dalka.
Sida muuqata,qaab aan xisaab la heyn ayay u sii badanayaan musharraxiinta doonaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Mas’uuliyiin horey jegooyin uga soo qabtay dalka oo aqoon loo leeyahay iyo kuwoo cusub oo aan si cad loo qeexi karin shakhsiyaddooda ayaa tartamaya.
Soomaaliya waa dal dhan waliba ka bur-bursan,dhibaato xunna ay ku heyso qabyaaladda,walow ay jiraan dad badan oo doonaya in laga gudbo cudurkan halista ah.
Waa dhaqan soo jireen ah in shacabku ay ku kala duwanaadaan arragtiyada marka ay timaado qofka lagu aaminayo hoggaanka sare ee dalka, xan suuqeedkana waa halkeeda.
Musuq-maasuq iyo qabyaallad ayaa la soo hadal qaadaa marka ay doorasho timaado,haddii uu warkaasi run yahay ama la been abuurayo iyo sida looga gudbi karaba, waa howl u taalla shacabka Soomaaliyeed.
Kama jiraan dalka xisbiyo xambaarsan arragtiyo siyaasadeed oo lagu dooran karo,waase xaqiiqo in musharrax waliba uu la baxay magac xisbiyadeed,kadib markii la haleeli waayay sharciyada asxaabta iyo hir-gellintooda.
Sidaas darteed,waa hubaal in dad badan ay ku wareersan yihiin hoggaamiyihii ay ka dooran la haayeen musharraxiintan tirada badan ee uu ku wada jiro hammiga sare.
Haddaba,waa in 10-kan astaan lagu doortaa ama uu ku sifoobaa madaxweynaha soo coda.
DAACADNIMO-Madaxweynaha wanaagsan, waxaa uu ku hadlaa run,waxaa uuna ku shaqeeyaa oo ilaaliyaa kalsoonida ay siiyeen dadkiisa. Dabcan, mana lunsado oo ma musuq-maasuqo lacagta qaranka.
Haddii uu dareemo inuu galay khallad hoggaamineed ,isla markiiba wuu ka tegaa xilka. Ogow daacadnimmadu waa siyaasadda ugu wanaagsan ee lagu dhaqmo.
WAX-QABAD- Hoggaamiyaha wanaagsan waa astaan lagu daydo,dhaqankiisana waxaa uu saameyn dhan waliba ah ku leeyahay bulshada.Waxaa uu ka dhabeeyaa ballamihii uu qaaday, walow ay mararka qaar jiri karaan caqabado gooni ah. Ha iloobin wax-qabadka ayaa ka wanaagsan hadlka badan.
KAL-GACAL– Hoggaamiyaha daacadda ah waa kan ay siyaasaddu ka tahay xaamaassad,doonaya inuu u adeeggo bulshadiisa ,laakiin aan xilka u dooneynin inuu tabcado oo uu helo hanti. U codey xildhibaan, hoggaamiyaha jecel dadka laakiin aan qarash doonka aheyn.
IXTIRAAM- Madaxweynaha wax-galka ah waxaa uu qiimeeyaa dastuurka dalka,raacaana xeerarka la dejiyay, waxuuna oggolaadaa go’aannada sharciyadeed.Waxaa uu sidookale dhageystaa arragtida guud ee bulshada.
KALSOONI– Hoggaamiyaha weyn waa midka isku kalsoonaada,haddana leh awoodda uu ku qaadan karo go’aanno masiireed. Haddii uusan aaminsaneyn naftiisa,ma jiro qof u buuxin kara booskaas,taas macanaheedu ma ahan inuu noqdo keligiis taliye aan dadka kale maqlin.
XORNIMMO– Madaxweynaha adag ma noqdo BOOMBALO” qalabka ay ku dheellaan carruurta”.Go’aannadiisuna ma ahan kuwoo kala dhimman ama aan tayo laheyn.Kuma daneystaan dadka xirfaddoodu tahay boobka lacagta iyo kuwa u ooman in ay la wareeggaan maamulka dalka.
IHTIMAAM– Hoggaamiyaha meel marka ah,waa kan xilli walba ku riyooda inuu ka dhabeeyo hammigiisa siyaasadeed iyo horumarka dalka, lehna dulqaad iyo adkeysi aan dhammaad laheyn.
XIL-GUDASHO: Madaxweynaha tayada leh waa kan fahma inuu yahay madaxa guud ee dalka.Ma eedeeyo dadka ku tiirsan isaga,laakiin taas baddelkeeda waxaa uu qaataa mas’uuliyadda natiijooyinka soo baxa xilliyada adag.Waxaa uu issu aqoonsadaa uu yahay AABBAHA dalka.
DABACSANAAN- Madaxweynaha wax hoggaamin kara waa midka qirta khalladaadkiisa, sheegana meelaha uu ka liito.Waxaa uu sidookale caddeeyaa in uusan ku wanaagsaneyn wax walbo,una baahan yahay dad la shaqeeya oo caawiya. Haddii aad arragto hoggaamiye leh wax walbo waan qaban karaa, waxay u dhowdahay inuu fashilmo.
JACEYL– Madaxweynaha u qalma hoggaaminta, waa midka jecel dadkiisa,dalkiisa iyo diintiisa.
Haddiiba ay jiraan oo aad taqaan madaxweyneyaal wanaagsan, waxay dalalkoodu ku hoggaamiyeen nabad, waxayna abuureen dhaqaalle hor-seeday hormar nololeed.
GABO-GABO– Waan ka cudur daaranayaa haddii aanan qorin qodobo muhiim ahaa, waana soo dhoweynayaa waxii sixitaan iyo wax ku kordhin ah.
W/Q: Maxamed Cisman Cumar Xabiib.
Hay’adda Culimada Soomaaliyeed oo ka digtay Qoondada Haweenka ee Baarlamaanka
Marwo Khadiijo”Waxaan ahay xildhibaan guriga uu ku dhashay ilmana ku dhalay uu Jowhar ku yaal”(Sawiro)